Sida loo Beddelaan MKV si iPhone 4s iyo dhamaan noocyada (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > iPhone > Sida loo Beddelaan MKV si iPhone 5S / 5 / 4s iyo dhamaan noocyada (Windows 10 ka mid ah)
Waa maxay MKV?
MKV, gaaban Matroska Video, ka duwan MP3, MP4 iyo wax la mid ah kuwa, ma aha qaab warbaahinta, laakiin extensible ah furo caadiga ah Audio weel / Video. Waxaan sida weelka multimedia ah awoodo la hubo. MKV aan lagu ciyaari karin ee Mac by default. Si kastaba ha ahaatee, by diinta iPhone qaabab socon, aad ku raaxaysan karaan MKV on iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6s , iPhone 4, iyo tusaalayaal kale oo ah iPhone.
Sida loo Daawo videos MKV on iPhone (iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6s)?
iPhone ma taageeraan videos MKV formatted laakiin kaliya MOV, MP4 M4V ama, qaar ka mid ah faylasha gaar ahaan AVI waxaa loo ogol yahay. Sida horumarinta MKV, videos iyo aad u badan ayaa la badbaadiyey sida faylasha MKV, kaas oo markaa u baahan tahay in aad si loogu badalo MKV video inay iPhone qaab socon haddii aad argo MKV play on iPhone u madadaalada on go ah. In sidaa la yeelo, MKV xirfadle in Converter iPhone gargaaree weyn.
Inkastoo ay jiraan boqolaal converters video suuqa, kuwaas oo loo soo bandhigay iyadoo shaqo ee diinta video format file oo dhan ka dhex, waxaa jira noocyo ka mid ah xaaladaha hoos na loo oggolaado: Shil barnaamijyada, luma tayada video, qaab xaddidan oo ay taageerayaan iwm si ay u aad mar badbaadiyo, waxaan halkan si toos ah idin ​​tusiyo Video Converter for Windows (Windows 8 taageeray) iyo Video Converter u Mac si ay u xaliyaan dhibaatadaada sidii si fudud oo dhaqso badan ee suurtogalka ah. Iyadoo qaab kaamil ah inta lagu guda jiro qaab beddelidda, labada intaa siisa horena ah filaayo in iPhone si aad u dhigi MKV in ay iPhone sahlan shaqada:
Tallaabada MKV 1. Add video in MKV in ay Converter iPhone
Guji "Add Files" button inay ku shuban files MKV (haddii aad beddesho fikrad oo aad rabto inaad tirtirto file this, riix tirtirto). Waxa kale oo aad u habayn karaan faylasha iyaga oo jiidayeen.
Dooro iPhone sida qaab saarka adigoo gujinaya "Qaabka Output" image dhanka midig ka dibna si "Device" socday> "Apple"> "iPhone". MKV video inay diinta ka iPhone bilaabo Ka hor, waa ikhtiyaari in astaysto aad videos by falinjeeerka qaybo rabin, lana siii mark ganacsi oo laga yaqyaqsado, biirtay video clips ka mid ah galay, iwm Waxaad samayn kartaa video kaamil ah adigoo riixaya "Edit" button.
Tallaabada 3. Start si loogu badalo MKV si iPhone
Marka aad xaqiijin wax walba u dhacaan sidii aad qorshaynayso, riix "Beddelaan". Bar horumarka ayaa ku tusi processing qaab beddelidda doonaa. Markaas hambalyo! Waad ku istareexi kartaa videos on macruufka 4 dhowr ilbiriqsi gudahood.
U fiirso mar kale: Haddii aad tahay dadka isticmaala Mac, isku day in MKV iPhone Converter Mac (Snow Leopard, Libaaxa ka mid ah) la isku tallaabooyin.
Waxay leeyihiin waqti fiican la leedahay warbaahinta files on iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6s, iPhone 4, iPhone 3GS, oo dhan!